Maitiro ekuronga kutumira kweSMS pane iyo iPhone (tweak) | IPhone nhau
Munyika dzakaita seUnited States, SMS ndiyo yekukurukurirana chishandiso, ichisiya iko kutumira mameseji parutivi, nekudaro Apple inoenderera nekuwedzera mamwe mabasa kuMessage application, mabasa ayo asingawanzo kuwanikwa muchirongwa ichi. sezvo Tsika yemashure kana uchitumira mameseji, mhedzisiro kana kunyorera zvakabatanidzwa mukati mekushandisa.
Kutenda kune izvi zvakasanganiswa zvinoshandiswa isu zvatinogona shandisa app app usingasiye iyo Messages app. Asi kana isu tichida kuwedzera mamwe mabasa asiri kuwanikwa panguva ino, isu tinofanirwa kutendeukira kune iyo jailbreak. Nhasi tiri kutaura nezve Kairos 2, chikumbiro chinotibvumidza kuronga kunonoka kutumira kweSMS.
Iko kushanda kweiyi tweak kuri nyore, nekuti isu tinongofanirwa kunyora meseji yatinoda kutumira uye tinya pane bhatani. Ipapo iyi tweak ichatanga kushanda uye ichatizivisa kana tichida kutumira meseji nekukasira kana kana tichida kuinonoka kusvika kune rimwe zuva nenguva. Paunenge uchironga kutumirwa kweSMS, inozochengetwa mukushandisa uye inozotumirwa otomatiki kana zuva rakatarwa nenguva nenguva zvasvika.
Asi zvakare, mukati mesarudzo idzo Kairo 2 inotipa, tinogona kudzokorora kutumira SMS, zvekuti vhiki rega rega SMS inotumirwa kumunhu anoyeuka chiitiko, achizivisa nezvekuenda kwako, nezve izvo zvavanofanira kutenga zvese mavhiki ... zvekupedzisira zvinoshandiswa nguva dzose zvinofanirwa kuwanikwa nemushandisi. Kairos 2 yakasiyana neakawanda tweak ataura nezvayo kare, inowanikwa pane BigBoss repo ye $ 2,99 uye inoenderana neIOS 10, mutengo wakanyanyisa kuwanda kana tisingagare munyika umo maSMS ndiyo inonyanya kushandiswa mameseji papuratifomu sezvandataura pamusoro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 10 » Maitiro ekuronga kutumira SMS pa iPhone (tweak)
Yekutanga Apple Store muTaiwan ichavhura muna Chikunguru 1